USjava uzolingisa kwiSibaya
USJAVA useqalile ukuqopha emdlalweni Isibaya lapho ezolingisa khona indawo yegosa elihola izinsizwa ngengoma Isithombe: TWITTER
NOKUBONGWA PHENYANE | November 8, 2019
UZOLINGISA indawo yegosa lezinsizwa, elizifundisa ingoma umculi osezakhele igama kuleli uSjava, oseqalile ukuqopha emdlalweni Isibaya.
USjava uzoqala ukubonakala kulo mdlalo maduzane.
Isolezwe lithole ngomthombo ongashayi eceleni ukuthi indawo azoyilingisa lo mculi izogxila emculweni.
“Kukhona umncintiswano wengoma ozoqala ozokwenziwa wuMandla Ndlovu (Bongani Gumede), kulapho uSjava ezovela khona njengoba ezofika ezofundisa aphinde asize abantu ngengoma. Kodwa kulo mdlalo uzobe ecula izingoma ezintsha ngeke kuzwakale lezi zakhe ezaziwayo manje,” kuchaza umthombo.
Uthe okunye azogqama ekwenza kulo mdlalo uzobe eqwashisa nangokuphathwa kahle kwabantu besifazane.
“Kuningi azokuveza okumele amadoda akwenze ukuze aphathe kahle abesifazane, indawo yakhe izoheha impela ikakhulukazi la ngasemculweni njengoba ezobe ehola izinsizwa kusha ingoma kuphela,” kuqhuba umthombo.
Uphinde waveza ukuthi enye indawo ezodonsa amehlo iphakathi kukaDuma (Muzi Mthabela), Qondi (Jessica Nkosi) noFezile (Andile Mxakaza).
“Uzoba mkhulu umbango phakathi kwalezi zinsizwa zibanga intombi, uFezile akazi ukuthi kwenzakalani manje phakathi kwalaba, uzobuya ejabule njengoba kukhona into azobe eyizuzile ethi uzoyijabulela noQondi ababambe oqotsheni bejabulela uthando lwabo bese kushuba izinto,” kuchaza umthombo.
UPhilly Kubeka weMzansi Magic ukuqinisekisile ukuthi uSjava useyingxenye yalo mdlalo futhi kuwona uzobonakala isikhashana.
USjava ungena ekulingiseni nje igama lakhe emculweni lihle njengoba esehlabane ngezindondo ezahlukene okukhona kuzo eyeBET, ayithola ngonyaka odlule eMelika.